के तपाईलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि पिसाब आउछ ? यी हुन सक्छन् कारणहरु - Jhapa Online
के तपाईलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि पिसाब आउछ ? यी हुन सक्छन् कारणहरु
सामान्यतः साना बच्चाहरुले कपडामै पिसाब गर्छन् । जब उनीहरु ठूला हुन्छन्, बिस्तारै दिसापिसाब केहीबेर रोक्न सिक्छन् । तर केही मानिसमा वयस्क भएपछि पनि पिसाब रोक्न नसक्ने समस्या रहिरहन्छ ।
केही मानिसमा बानीका कारण हुनसक्ने भएपनि अधिकांश मानिसमा यस्तो समस्या रोगका कारण हुन्छ । यस्तो रोगलाई युरिनरी इन्कन्टिनेन्स भनिन्छ । यो दिमागसंग सम्बन्धित रोग हो । यसको लक्षण पार्किन्सन्ससंग मिल्छ, जसमा नचाहँदा नचाहँदै पिसाब निस्कन्छ ।
पार्किन्सन्समा जस्तै यो रोगमा पनि डिप्रेसनका लक्षण देखिन्छन् । बिरामी तनावमा हुन्छन् र पिसाब रोक्न सक्दैनन् । यसले महिला र पुरुषलाई अलग–अलग तरिकाले प्रभावित बनाउँछ । बच्चामा पनि यो समस्या देखिन्छ । यस्तो समस्या भएका बिरामी लाजका कारण अरुसंग त्यति सम्पर्कमा रहँदैंनन् । जसका कारण उसमा चिडचिडाहट हुने, रिस उठ्ने समस्या देखिन्छ । पिसाब रोक्न नसक्ने समस्या दिमागसंग सम्बन्धित हुन सक्छन् । जुन यस प्रकार छन् ?
डिप्रेसन यस्तो समस्या हो, जो बिस्तारै मानिसको जीवनशैलीको हिस्सा बनिरहेको छ । डिप्रेसनमा मानिसको शरीर नै उसको नियन्त्रणमा हुँदैंन । समस्या जटील हुँदैं गएपछि बिरामीले आत्महत्या गर्ने कोशिस गर्छ र अधिकांश अवस्थामा जीवन नै गुम्छ । यसका विविध रुप हुन्छन् । कसैलाई मानसिक, कसैलाई सामाजिक, कसैलाई वातावरणीय तनाव हुन्छ । यदि आफूलाई डिप्रेसनको समस्या सुरु भएको संकेत पाउनासाथ परिवार र साथीभाईलाई थाहा दिनुपर्छ या सल्लाह लिनुपर्छ ।